Zvokuita mushure mekuisa openSUSE tumbleweed | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mechokwadi kuvhuraSUSE tumbleweed kuisirwa muchikwata chedu, zvimwe zvigadziridzo zvinoramba zvichiitwa, saizvozvo Iyi haisi yepamutemo gwara, inongotarisana neinonyanya kudiwa nenharaunda.
Ndokusaka ruzivo urwu rwakaunganidzwa mune imwechete chinyorwa, hazvidi kuita zvese zvakatsanangurwa pano, Izvo zvakasarudzika uye ndinovimba kuti zvimwe zvezvinotsanangurwa pano zvichave zvekushandisa kwako, tisina kumbononoka tinotanga.
1 Bvumira networking mune yakavhurikaSUSE tumbleweed
2 Gadziridza iyo system.
3 Shandisa iyo Packman repository
4 Isa ATI / AMD uye NVIDIA Yakavanzika Madhiraivha
Bvumira networking mune yakavhurikaSUSE tumbleweed
Nhanho yekutanga yandakasangana nayo ndeyekuti ini ndaive ndisina network yakabatidzwa, nekuda kwechimwe chikonzero ini ndakanga ndisina network interface, saka handina mubvunzo kuti zvichaitika kune mumwe munhu.
Usavhunduke chinhu chinowanzoenderana nezvandinoverenga pamambure.
Izvi zvinoitika nekuti iyo kernel module haina kutakurwa nemazvo. inova ndiyo yakagadzirirwa kushanda ne chipset yedu, zvinogona zvakare kuitika kwauri panguva yekumisikidzwa.
Inozvigadzirisa kune izvi zviri nyore.
Tinofanira kuenda kuNetwork Devices tinodzvanya pairi uye tichaona skrini yakafanana neiyi.
Mune yangu kesi, module yakaonekwa, asi haina kugadziridzwa.
Kana ikasaonekwa, unofanirwa kutsvaga chipset yauinayo uye kernel module yainogara uye mubhatani rekuwedzera unopinda dhata inoenderana nayo.
Zvangu Ini ndaingofanirwa kubaya edit uye imwe hwindo ichavhura, hwindo rakadai rinoonekwa pano.
Yangu nyaya, ini handigare yakamira IP, yaive yekumisikidza gadziriso, ini ndinotora ine simba IP, saka ndinofanira kusarudza rine simba kero bhokisi ndisiye zvariri.
Mune mhando yedhizaiti ndinoiisa se "ethernet" kana iine waya kana iri wifi kana imwe mhando yaunosarudza kubva pane rondedzero inoratidza ipapo, uye muzita re interface unofanirwa kuiisa nekutadza.
Isu tinongopa inotevera uye nayo ichave yatove yakamisikidzwa
Zvisinei, Ini ndinogovana newe gwara muPDF yandakawana pamambure, chinongedzo ichi.
Gadziridza iyo system.
Mushure mekumisikidza network, nhanho yekutanga yakakosha ndeyekuvandudza mapakeji ese pane system, nekuti izvi isu tinofanirwa kuita inotevera mirairo:
Isu tinovhura iyo koni uye seye superuser isu tinoita inotevera mirairo.
isa zvese zviripo zvekuchengetedza zvigamba uye zvigadziriso zvebug:
Uye takagadzirira nayo isu tichava needu system kumusoro.
Shandisa iyo Packman repository
Este ndeimwe yeanonyanya kushandiswa matura mune yakavhurikaSUSE, asi kupihwa huzivi hwe distro iyi repo haina kumisikidzwa nekutadza.
Mune izvi tichawana maturusi mazhinji uye zvinoshandiswa yeiyo system, kusanganisira macodec uye madhiraivha.
Kuti uite tinofanira kuzviita mune iyo Software Repositories chikamu uye tinodzvanya pane bhatani re "Wedzera" izvozvi mukati mezvasarudzo zvarinoratidza isu tinosarudza "Nharaunda dzekuchengetedza
Chekupedzisira tinotevera uye tinosarudza iyo Packman repository, tinobaya gamuchira uye ichawedzerwa kuhurongwa, ichatibvunza kana tichida kubvuma kupinza kiyi yakavimbika yeGnuPG nekudzvanya pane bhatani re "Trust".
Isa ATI / AMD uye NVIDIA Yakavanzika Madhiraivha
Patinoisa iyo system, Nokusingaperi madhiraivha emahara aripo eLinux akaiswaKunyangwe ivo vakanaka kwazvo, hazvigone kurambwa kuti kuita zviri nani kunowanikwa nekuisa izvo zvinopihwa zvakananga nemugadziri.
Kune izvi, kana iwe ukagadzira iyo Packman repository, iwe ungadai wakacherekedza kuti imwe yakaonekwawo ine zita reNVIDIA kana ATI / AMD, unofanira kuzviita.
YaST> Software> Repositories> Wedzera> Nharaunda reposheni uye maka chiratidzo * Graphics Dhirairi uye "Gamuchira".
Chekupedzisira, isu tinongofanirwa kuisa mapakeji akakodzera ekadhi redu, sezvo iri chikamu chakakura kwazvo, ndinokusiira iyi link ATI / AMD kana NVIDIA, kwaunogona kuwana mapakeji mune kamwe chete baya kumisikidza kana iyo yekupedzisira mirairo zvichienderana neyako modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa yakavhurikaSUSE tumbleweed
Kubva pane zvandakaverenga pane tumbleweed:
1º- Zvinokurudzirwa kuti mapaketi mapaketi ane kukoshesa kwakanyanya, semuenzaniso kuisa pekutanga makumi manomwe panzvimbo pe makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kuenda kunhamba yepasi yepamusoro.
2º- Zvinokurudzirwa kushandura mapakeji kune mupaki wepaketi, izvo zvinogona kuitwa nesoftware module.
3º- Iwo iwo wakakodzera kuraira kuti uvandudze mune tumbleweed is sudo zypper dup (kumusoro ndeyekukwakuka)
4º- Hazvikuvadze kubvisa mapatani ese uye kubvisa mapakeji iwe ausingashandise, nenzira iyi unovadzivirira kubva pakuda kuidzosera.
5º- Kubvisa mapakeji iwe ausingashandise uye kusakosha kuderera kwepakataurwa mapakeji ndiwo uchave iwo murairo:
sudo zypper rm -u package1 pasuru 2
(chinja pack 1 pack 2 yechero chaunoda kubvisa)
Zvakanaka kumusoro kunobva pakuvandudza uye kubiridzira kubva kukwidziridzwa, mune yangu network yaive yakanaka kwazvo, chii chakandibhadharira yakawanda scanner ye multifunction printer, iyo yekumisikidza yeangu multifunction printa isvetuka 42.3 Ini ndaifarira tumbleweed zvakanyanya asi kana leap 15 yauya kunze ndinofunga ndichadzokera kwairi, izvo zvavasingazombondiburitse ndezvekurega kushandisa linux uye kunyanya Opensuse, kwemakore ikozvino handisati ndamboshandisa windows kupfuura shamwari dzangu kuti hapana nzira dzeku vabudise mumombe… ndinoti windows